UTwitch ukhupha into ekudala ilindelwe ye-SharePlay kwi-iOS | Iindaba ze-iPhone
UAlex Vicente | 01/12/2021 18:00 | Iapps zokusebenza, iOS 15
Ngokufika kwe-iOS 15, ukusebenza kwe SharePlay weza FaceTime, apho abasebenzisi banokuba nethuba lokujonga izahluko zochungechunge lwethu esiluthandayo, iimuvi okanye nayiphi na inkonzo yokusasaza ehambelana nayo ngaxeshanye njengomhlobo okanye ilungu losapho. Ewe, ngokohlaziyo oluvela Twitch, baya kube sele bedibanisa lo msebenzi, ukukwazi ukubona imisinga kunye ngexesha leefowuni zeFaceTime.
I-Twitch yongeze inkxaso yokusebenza kwe-SharePlay kwiqonga layo kunye nesicelo. Ngoko, vumela abasebenzisi ukuba bajonge ngokudibeneyo nayiphi na ividiyo eqongeni. Umsasazi wethu esiwuthandayo, ividiyo elibazisiweyo, umdlalo wevidiyo osasazwayo… nokuba yintoni na.
Izolo uTwitch wenze unxibelelwano olusemthethweni ngoTwitter. Inketho ye-sharePlay iyafumaneka kwizixhobo ezine-iOS 15.1 okanye ngaphezulu ngendlela efanayo ne-iPadOS 15.1. Akunjalo Apple TV, apho eli nqaku alikafumaneki.
Ukuze uqalise iseshoni ye-SharePlay, abasebenzisi kuya kufuneka sibe kumnxeba osebenzayo weFaceTime kwaye sifake yonke iTwitch app (Ngaphandle kokuba ungene, kunjalo).
Nje ukuba siqale iseshoni ye-sharePlay ngeFaceTime, bonke abathathi-nxaxheba befowuni baya kuba ilungelelaniswe kwindawo enye yokudlala ividiyo. Ukongeza, izilawuli ezichaphazela ukudlalwa kwevidiyo (unqumamo, dlala, ukuya phambili okanye umva ividiyo) nazo ziya kulungelelaniswa.
Kwakhona, iindaba ezilungileyo (kwaye ziphunyezwe kakuhle) kubasasazi beli qonga kukuba, Umsebenzisi ngamnye kumnxeba uya kubalwa njengombukeli, ukukwazi ukuba nolawulo lwangempela lweendwendwe zakho kunye nokukwazi ukuqondisa okanye ukuhlalutya umsebenzi wakho ngokubanzi.
Sicinga ukuba luluvo olulungileyo kuTwitch ukuba aphumeze oku kusebenza kwangoko, ukubheja ekutsaleni abalandeli abaninzi ngokuthetha ngomlomo nangokukhululeka kokukwazi ukuphawula nabahlobo okanye usapho ngalo naluphi na uhlobo lokudlala naphi na kwaye ngendlela ehambelanayo. Ukugqiba ngale ndlela ngokuthi «uwubonile umsinga we ...? Nini…". Siyathemba ukuba kancinci kancinci ezinye izicelo ziya kuhlaziywa ngendlela efanayo ukonwabela oku kusebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » UTwitch ukhupha into ekudala ilindelwe ye-SharePlay kwi-iOS
Lo ngumzekelo wezinye ii-AirPods kunye netshaja ye-Apple enetyala elingafihliyo ngokupheleleyo